Suvadin Media 88 0
Suvadin Media 101 0
Suvadin Media 87 0
धुलिखेल अस्पतालमा डेंगी र स्क्रबटाइफसका १४ जना बिर...
बनेपा । धुलिखेल अस्पतालमा डेंगी र स्क्रबटाइफसका १४ जना बिरामी भर्ना भएका छन्। भर्ना भएकामा डेंगीका सात र बाँकी स्क्रबटाइफस संक्रमित छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द...
Suvadin Media 109 0
धुलिखेल अस्पतालमा डेंगी र स्क्रबटाइफसका १४ जना बिरामी
सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा २४ डेंगु संक्रमित फेला
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा २४ जनामा डेंगु रोगको सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि गरिएको छ ।
Suvadin Media 95 0
जनगणनामा जाति भाषाबारे त्रुटि नदोहोर्‍याउन सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को तयारीको सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज यहाँ गरेको अन्तरक्रियामा भाषा तथा जातजाति सम्बन्धमा विगतमा भएका त्रुटि नदोहोर्‍याउन सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय तथ...
विराटनगरमा भेटिए १२ जना डेङ्गु सङ्क्रमित
विराटनगरमा १२ जनामा डेङ्गु रोगको सङक्रमण भेटिएको छ । सङ्क्रमित सबै विराटनगरस्थित प्रादेशिक (कोशी) अस्पतालमा उपचार गराइरहेको चिकित्सक डा सङ्ज्ञा ज्ञावलीले बताविराटनगरमा १२ जनामा भेटियो डेङ्गु सङ्क्रमण...
Suvadin Media 116 0
डा. सन्दुक रुइतलाई पनि डेंगुको संक्रमण, तीन दिनदेख...
काठमाडौं । नेत्र विशेषज्ञ प्राडा. सन्दुक रुइत तीन दिनयता अस्पतालमा छन् । डेंगुको संक्रमणले आफैं बिरामी परेर थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा उनी भर्ना भएका हुन् । घरैमा उनीसहित रुइत परिवारका तीन जनालाई डेंग...
Suvadin Media 103 0
डेंगु परिक्षण गर्ने किट नै अभाव, के हो डेंगु, यसरी...
यतिवेला देशैंभरी डेंगुको प्रकोप देखिएको छ । करिव दुई महिना पहिले देखिएको डेंगु संक्रमण अझै रोकिँएको छैन । झनै यसले भयावह रुप लिइरहेको छ ।
डेंगु परिक्षण गर्ने किट नै अभाव, के हो डेंगु, यसरी अपनाउन सकिन्छ सतर्कता
सरकारले भने आफू एक्लैले डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्ने लाचार जवाफ दिइसकेको छ । यी अभिव्यक्तिबाट राज्य यसमा गम्भीरतापूर्वक नलागेको प्रस्टिन्छ। नियन्त्रणका उपाय खोजिएका छैनन् । यही गतिमा डेंगुको प्रभाव वि...
Suvadin Media 91 0
मानिसलाई एकदिनमा कति प्रोटिन चाहिन्छ र के-केमा पाइ...
एजेन्सी । प्रोटिन मानिसको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरको कोशिका निर्माण र मर्मतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो हरेक उमेरका मानिसलाई आवश्यक हुन्छ। गर्भावस्थामा प्रोटिन बढी आवश्यक हुन्...
Suvadin Media 120 0
मानिसलाई एकदिनमा कति प्रोटिन चाहिन्छ र के-केमा पाइन्छ ?
पोखरामा पनि डेङ्गुको सन्‍त्रास
कास्कीमा डेङ्गुका बिरामी बढेका छन् । कास्कीमा बिहीबारसम्ममा ६४९ डेङ्गु रोगबाट पीडित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जामा १८, तनहुँमा १० र पर्वतमा दुई जना रोगी देखिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नि...
महोत्तरी । महोत्तरी, धनुषा र केही वर्षदेखि सर्लाही जिल्लाको संयुक्त कारागारको रुपमा रहेको जलेश्वर कारागारमा बस्दै आएका कैदीबन्दीमध्ये एकचौथाइ कैदीबन्दीमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप देखिएको छ । अत्यधिक गर...
DilipKarki 79 0
कृषि मन्त्रीलाई नै देखियो डेंगु संक्रमण
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई डेंगु संक्रमण देखिएको छ । डेंगु संक्रमण देखिएका खनाललाई ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ ।
DilipKarki 104 0
'क्यानसर लाग्दैमा जीवनको अन्त्य हुँदैन'
काठमाडौं । पछिल्लो समय क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गइरहेको विभिन्‍न स्वास्थ्य संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । वर्षेनी १५ हजारले नेपालमा क्यान्सरकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । वार्ष...
DilipKarki 421 0
चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण नहुँदा बल्झियो छात्रवृत...
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्णतामा ढिलाइ भएपछि चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति र शुल्क व्यवस्थापनको विषय पुनः बल्झिएको छ । एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको सम्मुखमा विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्य...
चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण नहुँदा बल्झियो छात्रवृत्ति विवाद
कस्तो हुनुपर्छ हाइजेनिक भान्सा ?
एजेन्सी । घरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान भनेकै भान्सा हो । हामी बिहानको चियादेखि रातिको खानासम्म भान्सामै खान्छौं । त्यसैले हाम्रो भान्सा सफा हुनु अनिवार्य छ । भान्सा सफा मात्र भएर हुँदैन, हाइजेनिकसमे...
भक्तपुर जिल्लामा देखियो १२ जनामा डेंगु संक्रमण
तीन महिना यता डेंगुको संक्रमण देशैभरि फैलिएको छ । देशैभर डेंगुबाट ग्रसित बनिरहँदा भक्तपुर जिल्लामा मात्रै १२ बिरामी फेला परेका छन् ।
DilipKarki 162 0
किन हुन्छ मृगौला फेल ? यस्ता छन् बच्‍ने उपाय
काठमाडौं । मिर्गौलाको मुख्य काम रगतलाई फिल्टर गरेर टक्सिन अर्थात् विषाक्त वस्तुलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्नु हो । यसले रगतमा पानी, नुन तथा अन्य खनिज पदार्थलाई सन्तुलित बनाएर राख्छ । यदि कुनै का...
फैलिदै डेंगु संक्रमण, यसरी अपनाउन सकिन्छ सुरक्षा
पछिल्लो समय डेंगुले भयावह रुप लिइरहेको छ । सुनसरीबाट सुरु भएको डेंगु तीन महिना यता ४२ जिल्लामा फैलिएको छ । बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डेंगुबाट बैशाख यता पाँच हजार जना संक्र...
लामो सास फेर्दा मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ ?
एजेन्सी । अध्यात्मिक परम्पराले धेरै समय अगाडि नै स्वासप्रस्वास र मानसिक स्थितिबीचको सम्बन्धलाई अप्रत्यक्ष रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ । यही मान्यताका कारण हामी गहिरो सोच, चिन्ता, तनावलगायतका मानिसक असन्...
DilipKarki 114 0
सर्पदंशको बिगबिगी तर जिल्लामा छैन उपचार
दाङ । गत साउनको अन्तिमसाता राजपुर गाउँपालिका–७ भौवानाकामा सर्पदंशका कारण एकैपरिवारका दुई बालिकाको मृत्यु भएको थियो । राजपुर गाउँपालिका–७ भौवानाका शेरबहादुर सार्कीका १३ वर्षीया करि...
DilipKarki 121 0
स्थानीय सरकारले थाल्यो ‘सिकलसेल’उपचार
दाङ । गत असारको दोस्रो सातामात्रै घोराही उपमहानगरपालिकाले सिकलसेल उपचारका लागि निःशुल्क शिविरको आयोजना गर्‍यो । घोराहीको रामपुर, सौडियार र नारायणपुरमा गरिएको शिविरमा ५३ व्यक्तिमा सिकलसेल एनिमिया (...
DilipKarki 96 0
कागती : मोटोपन घटाउने साथी, मुटुरोगीको दुश्मन
एजेन्सी । गर्मीमा कागती पानी नरुचाउने व्यक्ति कम भेटिन्छन् । सामान्यतय कागती वा कागती पानी खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । मोटोपना घटाउन, शरीरमा उर्जा थप्न देखि हरेक किसिमले कागतीको फाइदा धेरै...
DilipKarki 72 0
देशभर डेंगुको त्रास, सरकार गम्भीर हुन आवश्यक
डेंगु नियन्त्रणका लागि जनचेतना फैलाउनेदेखि सबै संस्था र नागरिक समाजसमेत सहभागी भएर यसको नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नतिर लाग्न ढिलो हुँदै छ । सरकारले पनि सूचना जारी गरेर पन्छिँदा समस्या समाधार हुँदैन...
डेंगु नियन्त्रणबाहिर, डेंगु टेस्टकिटमा प्रतिबन्ध ल...
काठमाडौं । दिनानुदिन डेंगुका बिरामीहरु बढिरहेका छन् । काठमाडौंमा डेंगु नियन्त्रण बाहिर रहेकोले समयमै सजगता अपनाउनुपर्ने चिकत्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले भने डेंगु परीक्षणमा प्रयोग हुने किट...
डेंगु नियन्त्रणबाहिर, डेंगु टेस्टकिटमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी
प्रधानमन्त्रीको उपचार एक महिना लम्बिने, थालियो प्ल...
काठमाडौं । सिंगापुरमा स्वास्थ्यउपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलामा बढेको एन्टीबडी झार्न प...
DilipKarki 144 0
मानिसको तौल बिहानको समयमा किन कम हुन्छ ? तौल जोख्‍...
एजेन्सी । तपाईं कतिबेला आफ्नो तौल जाँच्ने गर्न हुन्छ ? यदि तपाई एक बिहानै तौल जोख्नु भएको छ भने तौल कम देृखाउँछ । तर, बेडमा जाने बेलासम्म तपाईंको तौल ह्वात्तै बढ्छ । आखिर किन ? एक दिनमै देखि...
मानिसको तौल बिहानको समयमा किन कम हुन्छ ? तौल जोख्‍ने उपयुक्त समय कुन ?